Zidane oo ka codsaday Real Madrid inay la soo wareegto mid ka mid ah daafacyada kooxda Arsenal – Gool FM
(Madrid) 04 Nof 2019. Tababaraha Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa weydiistay saraakiisha kooxda inay sameysayaan saxiixa daafac aad u wanaagsan suuqa furmi doono bisha Janaayo, sida ay ku warameyso saxaafada.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Daily Express” ee dalka England Zinedine Zidane ayaa doonaya inuu la soo wareego daafaca kooxda Arsenal ee William Saliba, kaasoo haatan amaah ugu maqan naadiga Saint-Étienne.
wargeyska “Daily Express” ee dalka England ayaa wuxuu sidoo kale daaha ka qaaday in u jeedka Zinedine Zidane uu yahay inuu la saxiixdo daafac cusub ee bedel u noqon kara Raphaël Varane.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Zidane uu codsaday inuu la sacdo adeegyada dhowr daafac oo uu ka mid yahay daafaca kooxda Monaco ee Benoît Badiashile, si midkood uu u keensado garoonka Santiago Bernabéu.
Si kastaba ha noqotee, Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay la dhibtooneyso dhibaato dhanka daafaca ah tan iyo xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, maadaama ay sare u sii socoto da’ada kabtankooda Sergio Ramos iyo hoos u dhaca ku yimid Raphaël Varane.